ကျွန် မနှလုံးသားကတော့ ဝူဟန် မှာသေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ် – Shwewiki.com
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက်၊ ၂၀၂၀။ ကျွန်မမိဘတွေနဲ့အတူ စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာ ဈေးဝယ်နေတုန်း ကျွန်မချစ်သူ Dong Sinh က wechat ကနေ စာတစ်စောင်ပို့လာတယ်။ “ကလေးလေး ကိုယ်နည်းနည်း ပင်ပန်းနေလို့၊ နေလို့လည်းမကောင်းဘူး။ ရောဂါများကူးနေပြီလားမသိဘူး.. ဆေးရုံသွားပြချင်တယ်”တဲ့။ ကျွန်မကလည်း မဟုတ်တာတွေပြောမနေနဲ့လို့ ဟောက်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဝူဟန်မှာက လူပေါင်းဆယ်သန်းကျော်ရှိတာ.. အဲဒီလူတွေအများကြီးထဲမှာမှ ကို့ကို ရောဂါကူးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ကိုက ဝူဟန်မှာပဲမွေးပြီး ဝူဟန်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဝူဟန်သားစစ်စစ်။
ကျွန်မနဲ့ ကိုနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်းဟာ သုံးနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။ ဘွဲ့ရပြီးတော့ ကျွန်မက ဝူဟန်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကိုနဲ့ တွေ့တာပဲ။ ကိုက company ကြီးတစ်ခုရဲ့ Programmer။ ကျွန်မကတော့ … အင်း ကျွန်မကတော့ ဖက်ရှင် company တစ်ခုရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ အခြားချစ်သူတွေလိုပဲ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်မှာလည်း နှစ်ယောက်အတူတူမက်ထားတဲ့ နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်တွေရှိတယ်။ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှာမယ်။ အတူနေဖို့ နွေးထွေးတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးဖန်တီးကြမယ်ပေ့ါ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ တစ်သက်လုံးအတူနေခွင့်ရတဲ့သူတွေဆိုတာ ဘဝမှာ ကံအကောင်းဆုံးသူတွေပဲ။ ကျောင်းတက်ရင်း၊အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ဝူဟန်မှာ ကျွန်မ ခုနစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တယ်။ လူတွေက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရာရာကိုချစ်မိတတ်ကြလားမသိဘူး။ ကို့ကြောင့် ဝူဟန်ကိုလည်း ချစ်တတ်လာတယ်။ ကိုတို့မိသားစုက မြို့မှာနေပေမယ့် ကျွန်မမိဘတွေကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. တောင်သူလယ်သမားတွေ။ အမေတို့က ကျွန်မ ဝူဟန်မှာအခြေချနေတာကို နည်းနည်းမှကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်ခဲ့ဖို့ အမြဲတမ်းပြောတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကျွန်မကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ကိုမရှိတဲ့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှ မနေနိုင်ဘူးလေ။ ပြီးတော့.. ကျွန်မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ကိုက ကျွန်မကို တစ်သက်လုံးပျော်အောင်ထားမယ့်သူဆိုတာ ယုံကြည်တယ်။
လာမယ့် နွေဦးရာသီဆိုရင် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်မယ်။ ဝူဟန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ချယ်ရီပန်းတွေအဆုပ်လိုက်ပွင့်နေမယ့်အချိန်မှာ ကျွန်မနဲ့ကိုကိုက သိပ်လှတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မှာလေ။ ဝူဟန်ရဲ့အလှပဆုံးအချိန်မှာ လက်ထပ်ပွဲကျင်းပပြီး အဲဒီအလှပဆုံးအချိန်လေးကို တစ်သက်လုံးတည်တံ့အောင် သိမ်းဆည်းသွားမှာပေါ့။
အဲဒီနေ့ လေးနာရီခွဲမှာ ကိုက စာထပ်ပို့လာတယ်။ ဆေးရုံမှာ လူတွေအရမ်းများနေလို့ ခုထိ တုံကင်နံပါတ်တောင်မရနိုင်သေးဘူးတဲ့..အကြာကြီးမတ်တပ်ရပ်စောင့်နေရတုန်းတဲ့။ စောင့်ရတဲ့လိုင်းကလည်း အရှည်ကြီးလို့ပြောတယ်။ ကိုရယ် အခြားဆေးရုံပြောင်းပြပါလားဆိုတော့ ကိုက မထူးဘူးတဲ့။ အခြားဆေးရုံတွေမှာလည်း လူနာတွေပုံနေပြီတဲ့။ အဲဒီတော့မှ ဒီကူးစက်ရောဂါအခြေအနေက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါလားလို့ ကျွန်မ သတိထားမိသွားတယ်။
ကို့ကို ဘယ်လိုနေသေးလဲလို့ မေးတော့.. ကိုက တစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲပြီး ပင်ပန်းနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါတွေက နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ကျွန်မတော့ ဆုတောင်းမိတာပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်တွေပိုပူလာတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမနေနဲ့တော့ အိမ်ပြန်ပြီး မိဘတွေနဲ့ နေလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုသတိရသွားပြီး ဖုန်းအမြန်ခေါ်ရတယ်။ သူ့အမျိုးသားက ဆရာဝန်လေ.. ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ကို့ကိုများ ကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မလားပေ့ါ။ အဲဒီမိတ်ဆွေက သူ့အမျိုးသားက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်တာမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆေးရုံက ဖျားနာနေတဲ့ လူနာတွေကိုလက်မခံဘူးတဲ့။ ကျွန်မစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ ကိုကလည်း ဆေးရုံပြဖို့ စောင့်နေရတာ ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိမ်ပြန်သွားရှာပြီ။ ကျွန်မ ရထားလက်မှတ်ချက်ချင်းလှမ်းဖြတ်တယ်။ဝူဟန်ကိုပြန်ပြီး ကို့အနားမှာ နေရမယ်။ ကို့က နေမကောင်းဘူး.. ကျွန်မကိုလိုအပ်နေတယ်။ပြန်မှဖြစ်မယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မ ဝူဟန်ကိုပြန်တဲ့ အမြန်ရထားလက်မှတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် လက်မှတ်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြန်ချက်ပဲပြန်ရခဲ့တယ်။ ဝူဟန်က တစ်မြို့လုံးကို ပိတ်ချလိုက်ပြီ။အဝင်အထွက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့။ ဝူဟန်မြို့ကြီးက ပိတ်ချလိုက်ပြီတဲ့.. ဒါပေမယ့်..ကျွန်မအသက်ထက်ချစ်ရတဲ့သူက အဲဒီမြို့ထဲမှာ။ ဒီရောဂါဆိုးကြီးက ကျွန်မထင်ထားတာထက် အခြေအနေအများကြီးပိုဆိုးနေပါရောလား။ ကျွန်မ အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး။ ကို့ကို video call ခေါ်လိုက်တယ်။ နဂိုထဲက အသားဖြူတဲ့ကိုက ဖြူဖြူဖျော့ဖျော့လေး။အားမရှိတဲ့ပုံနဲ့ ကျွန်မညအိပ်ရင် ဖက်အိပ်တတ်တဲ့ ဝက်ဝံရုပ်လေးကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်ထားတယ်။ ကို့ဘေးမှာက ဆေးတချို့ပြန့်ကြဲလို့။ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ တကယ်အဆင်မပြေဘူး။ ကို့ကို မြို့တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးကို ခေါ်ဖို့ပြောတယ်။ သူတို့ ဆေးရုံကားတွေဘာတွေခေါ်ပေးလိမ့်မယ်လို့။ ကိုက ဆေးရုံကားတွေလည်း မရတော့ဘူး။ အလျဉ်မမီတော့ဘူးတဲ့။
နောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့ ကိုက အဖျားကျသွားကြောင်းနဲ့ စိတ်မပူဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်မ စိတ်မပူအောင် လျှောက်ပြောနေတာများလားဆိုပြီး ကို့ကို video call နဲ့ အပူချိန်တိုင်းပြခိုင်းတော့လည်း အဖျားက တကယ်ကျသွားတယ်။ စိတ်နည်းနည်းသက်သာသွားပြီး ကျွန်မ ကိုယ့်ဘာသာတွေးမိသေးတယ်။ ငါ့ကောင်လေးက ဒီလောက် စိတ်ထားကောင်းပြီး နွေးထွေးတဲ့ကောင်လေးကို ဒီရောဂါဆိုးကြီး ကူးတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့။ တွေးလို့မှမဆုံးသေးဘူး နောက်တစ်ရက်ကျတော့ ကိုက ဖုန်းမကိုင်တော့ဘူး။ ဗီဒီယိုကောပြောမယ်လို့ကတိပေးထားပေမယ့် လိုင်းတက်မလာဘူး။ ကျွန်မ အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီး ကို့မိဘတွေဆီဖုန်းဆက်တော့ သူတို့က ကို နေမကောင်းမှန်းတောင်မသိကြဘူး။ အိမ်ကိုလည်းပြန်မလာပါဘူးတဲ့။ တစ်မိသားစုလုံး ကို့ကိုဆက်သွယ်လို့မရလို့ ခေါင်းမီးတောက်နေပြီ။
ကို နေတဲ့ တိုက်ခန်းမန်နေဂျာကို ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ကိုနေတဲ့နေရာဝန်းကျင်မှာ ကူးစက်ရောဂါရှိသူတွေအရမ်းများနေလို့အသွားအလာမလုပ်ဖို့ ပိတ်ချထားတယ်တဲ့။ ဘုရားရေ။ ဒါပေမယ့် ကူးစက်ရောဂါရှိသူစာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်နာမည်မပါလို့ သိပ်စိတ်မပူဖို့တော့ ပြောတယ်။ သံသယလူနာစာရင်းထဲမှာတော့ ကိုပါနေပြီ။ သံသယလူနာစာရင်းထဲမှာပါနေပေမယ့် ဆေးရုံမှာ လူတွေပြည့်သိပ်နေလို့ အိမ်မှာပဲ အပြင်မထွက်ပဲ quarantine လုပ်ရမယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆေးရုံတွေမှာမဆန့်လို့ အိမ်မှာပဲနေရင်းနဲ့ သေသွားတဲ့ လူနာတွေအကြောင်း သတင်းတွေက အင်တာနက်မှာ ပွထနေပြီ။ နေ့လည်ကျတော့ ကိုက ဖုန်းပြန်ခေါ်တယ်။
ကို့မှာ ရောဂါရှိနေပြီတဲ့။ ကို ရောဂါကူးထားပါပြီတဲ့။ ကျွန်မ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး မှောင်အတိကျသွားသလိုပဲ။ ဒါ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ဒီလောက်စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး သူများတွေကို ကူညီတတ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကောင်လေးကလေ။ လောကကြီးက မတရားလိုက်တာ။ ရောဂါပိုးရှိနေမှန်းသိတာတောင် ကို့မှာ ဆေးရုံမှာမနေရရှာဘူး။ ဆေးရုံမှာ ကုတင်မလွတ်လို့ ပြင်ပလူနာခန်းမှာပဲ နေရတယ်။ ကိုကတော့ ဆေးရုံတွေကိုလည်း အပြစ်တင်လို့မရဘူးတဲ့ ရှင်းပြနေသေးတယ်။ဒီလောက်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကြားထဲကတောင် ကိုဟာ သူများတွေကို နားလည်ပေးဖို့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ပေးဖို့ သင်ပေးနေခဲ့သေးတယ်။ ကိုနဲ့ video call ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်မ မျက်ရည်ကျတော့ ကိုကပြောတယ်။ ကို ကျွန်မကို စနောက်တဲ့အခါ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ မချိုမချဉ်မျက်နှာမျိုးနဲ့“ကလေးလေး ဘယ်အချိန်မှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးလဲသိလား”တဲ့။ “ကို နောက်မနေနဲ့ ကျွန်မ ဝူဟန်ကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်လာပြီး ကို့ကို ပြုစုမယ်။
ကို က ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူပြောချင်တာပဲ ဆက်ပြောတယ်။ “ကလေး ငိုနေတဲ့အချိန်လေ။ ငိုနေရင် ရုပ်အဆိုးဆုံးပဲ။ ကြည့်ပါဦး တအားချောတဲ့ ခန့်ချောကြီး ကိုယ်က ဒီလို ရုပ်ဆိုးမလေးကို လက်ထပ်ရမှာလား ဇာတ်နာနေပြီ အရမ်းပဲ” ကျွန်မ မျက်ရည်တွေကြားက ရယ်မိတော့ ကိုကလည်း စိတ်သက်သာရာရသွားပုံနဲ့ အားတင်းပြီးလိုက်ရယ်တယ်။ ကျွန်မက ဝူဟန်ကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သွားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သွားခွင့်မရတော့ဘူး။ ကျွန်မက ဝူဟန်က ပြန်လာတာမကြာသေးဘူးဆိုတော့ ကျွန်မရော တစ်အိမ်သားလုံးရော အိမ်မှာပဲ self-quarantine လုပ်နေရတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်တွေကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်လာတိုင်းတယ်။
နာက်တစ်ရက်မှာ ကိုက ရုတ်တရက်ကြီး video ထခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မအသည်းကိုခွဲတဲ့ စကားတွေပြောတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ စကားတွေလေ။ “ကလေးလေး ကလေးအနားမှာ ကိုယ် အကြာကြီးရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ ကလေးက ကြံ့ခိုင်ပါတယ်။ မငိုနဲ့နော်.. မငိုပဲနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံပြီးဖြတ်သန်းပါ့မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကတိပေးနော်”တဲ့။ ဘာတွေလဲ။ဘယ်လိုကတိပေးရမှာလဲ။ အနားမှာ ကိုမရှိတော့ပဲ ဘယ်လိုအသက်ဆက်ရှင်ရမှာလဲ။ ကျွန်မ မရပ်မနား အကြာကြီးငိုခဲ့တယ်။ ကိုက ဖုန်းစခရင်ထဲကနေ ကျွန်မငိုတာကိုငေးနေတယ်။ ကို့ရှေ့မှာ မျက်ရည်မကျချင်ပေမယ့်လေ…။ ကိုမရှိပဲ ဘယ်လိုဆက်နေရမှာလဲလို့ တတွတ်တွတ်ပြောပြီး ငိုနေမိတယ်။
ကိုက အင်တာနက်ကနေ ဖိုင်တစ်ခုပို့လာတယ်။ အဲဒီစာက ကျွန်မဘဝထဲကို နောက်ထပ် ချစ်သူအသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ရင် အဲဒီချစ်သူအသစ်ကို သေချာပေါက်ပေးဖတ်ဖို့စာတဲ့။ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေကြားကပဲ စာကိုဖွင့်ဖတ်မိတယ်။
“ဒီစာကို ခင်ဗျား ဖတ်နေပြီဆိုရင် ကျွန်တော့ ကလေးရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဲ။ ခင်ဗျားအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကလေးရဲ့ နှလုံးသားကို ရအောင်သိမ်းပိုက်သွားတဲ့ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်မနာလိုဘူး။ ဒီစာကတော့ ကလေးရဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခင်ဗျားသိဖို့လိုအပ်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေပါ။
1. ကလေးက တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းမာတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများတယ်။ ကလေးကို စိတ်ပျက်ပြီး ထားမသွားပါနဲ့။ သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးပါ။ ခင်ဗျားက သူ့ကိုတစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားရမယ့်သူပါ။
2. ကလေးက ခဏခဏခေါင်းကိုက်တတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ သူ့ကို သွားမရှုပ်မိစေနဲ့။ သူခေါင်းကိုက်ရင် ကျွန်တော်က သူ့နားထင်တွေကို ငြင်ငြင်သာသာနှိပ်ပေးတတ်တယ်။ အဲဒါဆို သူအိပ်ပျော်သွားမယ်။ နိုးလာရင် ခေါင်းမကိုက်တော့ဘူး။ ဒါက ရိုးရာသမားတော်က ကျွန်တော့်ကိုပြောပြထားတဲ့နည်း။ သေချာမှတ်ထားပေးပါ။
3. ကလေးက စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်။ သူ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အချိန်တိုင်း ကျွန်တော်အမြဲနှစ်သိမ့်ပေးတယ်။ ကူညီပေးတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလိုလုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်အနားမှာမရှိနိုင်တော့ဘူး။ ခင်ဗျား သူ့ကို ကူညီပေးပါ။ နောက်တစ်ခုက ကလေးက ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအရမ်းကြိုက်တယ်။ တစ်ညတည်းနဲ့ ရုပ်ရှင်နှစ်ကားသုံးကားလောက်ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး မနက်သုံးနာရီလောက်မှ အိပ်ရာဝင်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလည်းရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အိပ်ရေးမဝတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူး။ သူ့ရဲ့အဲဒီအကျင့်ကို ရအောင်ပြင်ပေးပါ။ ခင်ဗျားကို ချစ်ရင် သူပြင်မှာပါ။
4. ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်တဲ့အခါ အခြားချစ်သူတွေလိုပဲ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲ။ အဲဒီအခက်အခဲတွေကို နှစ်ယောက်အတူ သည်းခံကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
5. ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ၊ဘယ်မှာနေလဲ၊ဘာအလုပ်လုပ်လဲ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားသူ့ကို ကျွန်တော်ချစ်သလိုပဲ ချစ်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့က အရေးကြီးတာပါ။ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လုံးပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီစာလေးရဲ့အဆုံးမှာ ကိုက သူ့ရဲ့ bank account password ကိုရေးပေးထားတယ်။ ဘဏ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံက ယွမ်တစ်သိန်းကျော်တယ်။ ကို အလုပ်စလုပ်ကတည်းက စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ။ ကိုက သူ့တစ်သက်လုံး ကျွန်မကိုပဲချစ်ခဲ့တာမို့ ဒီပိုက်ဆံတွေကလည်း ကျွန်မအတွက်ပါပဲတဲ့။
နောက်ထပ်သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ ကို ဆုံးပါးသွားပါတယ်။ ဝူဟန်မြို့ကြီးဟာ မြို့ပျက်ကြီးပဲ။ အဲဒီမြို့ကြီးထဲမှာ ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့သူတွေ ပိတ်မိနေခဲ့တယ်။ ရောဂါဝေဒနာဆိုးရွားစွာ ခံစားရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ဘယ်လောက်ခံစားနေရလဲ.. အသက်မဆုံးခင် ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ ဘယ်သူမှမသိဘူး။ အဲဒီမြို့ကြီးထဲမှာ ကျွန်မအသက်ထက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။
ကို သိလား.. ကို ထွက်သွားပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ ဝူဟန်က ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
အခုဆို ဆေးရုံတွေမှာ ကုတင်တွေအလုံအလောက်ရှိနေပြီ။ ဆေးရုံကုတင်အတွက် လူနာတွေတန်းစီစောင့်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဆေးရုံကုတင်တွေကသာ လူနာတွေကိုစောင့်နေပြီ။ ကို ဘာလို့ အချိန်နည်းနည်းလောက်ထပ်မစောင့်ပဲ သွားလိုက်ရတာလဲ။ ကိုသာ ရက်နည်းနည်းလောက်ထပ်စောင့်ခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ အတူပြန်ဆုံရဖို့ နောက်ဘဝအထိစောင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ အခုတော့…။
ကို တကယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ ကျွန်မ ဗိုက်အောင့်တဲ့အခါ ဘယ်သူက ဂရုစိုက်မှာလဲ။ ကျွန်မ ခေါင်းကိုက်ရင် ဘယ်သူကနှိပ်ပေးမှာလဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ဒေါသထွက်တဲ့အခါရော ဘယ်သူက နှစ်သိမ့်မှာလဲ။ ဝူဟန်မှာ ချယ်ရီတွေအဆုပ်လိုက်ပွင့်တဲ့အခါ ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်လို့ ကတိပေးထားတယ်လေ။ အတူတူကြိုးစားပြီး နွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးဖန်တီးမယ်ဆို။ ကို ကတိပေးခဲ့တာနော်။ အခုတော့ အရာအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားပြီ။
အခုတော့ ချယ်ရီတွေအဆုပ်လိုက်ပွင့်နေတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ကို့ကို လွမ်းနေရတယ်။ ကိုရော.. အဲဒီမြေသားတွေအောက်ကနေ ကျွန်မကို လွမ်းနေမှာလား။ ကို့ကို မေ့နိုင်အောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ။ ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးက ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်ပြီး တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲနေတာကို..သက်သာအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ။
ကျွန်မချစ်တဲ့ ကို.. ကျွန်မတို့ အတူတူချစ်ခဲ့ကြတယ်..ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်၊ ရယ်မောခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့..အရာအားလုံးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ။ ကျွန်မရယ်..ရပ်တန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ နာကျင်မှုတွေရယ်။ ကွဲကြေပျက်စီးသွားတဲ့ အိပ်မက်အပိုင်းအစတွေရယ်..။
My Boyfriend Die In Wuhan ကို ဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ချစ်သူတိုင်း ဒီ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အတူလက်တွဲကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ် မှာ Lockdown ရုပ် သိမ်း၊ ပြည်သူပြည်သား များ အောင်ပွဲ ခံပျော်မြူးနေကြ